Ekwentị mkpanaaka na-abịa na Ike! | Martech Zone
Ekwentị mkpanaaka na-abịa na Ike!
Ikuku na nso nso a nghoputa nke ndị ọrụ ekwentị Ekwentị ma chọpụta na 64% nke ndị ọrụ ekwentị anaghị eji ozi ederede. Ka m na-enyocha post a, ọ tụrụ m n'anya na saịtị ole na ole dị Akpata oyi wụrụ site nọmba.
Ikekwe m bụ onye ọrụ okenye karịa ụfọdụ ndị na-ede blọgụ na-aza ajụjụ, mana ọ tụrụ m n'anya maka ihe kpatara ya. O juru m anya na 65% nke ndị ọrụ n'ezie mere jiri ederede ederede. Ikekwe ọ bụ naanị na m tụgharịrị afọ 40 mana… n'ezie? Nke ahụ dị ka ihe ijuanya na 35% nke ndị ọrụ ekwentị anaghị eji igwe telegraph.
Pasent 35 nke ndị ọrụ ekwentị anaghị ede ozi n'ihi na ha chọpụtara na ha nwere ike n'ezie ekwu okwu n'ime obere igbe ahụ mara mma nke nwere ezigbo oge na onye ahụ na isi nke ọzọ. Ha ekwesịghị ịzọ mkpịsị aka ukwu ime ya. N’ezie, ide ozi n’ekwe ntị ga-abara gị uru ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka gị na onye gị na ya na-akpa, ma ị chọghị ịgwa ha okwu.
Ana m ekwu okwu njakịrị n'ezie, achọrọ m ịde ederede. Mymụ m na-ezigara ndị enyi ha ozi n’ekwughị oge, obi na-adị m ụtọ ma ha zitere m ozi n’ọgbakọ kama ịkpọ m. Ozi ederede ezighi ezi ma ọ bụ ozugbo. Ma ọ na-arị elu.
Ulo oru a na-agba mgba banyere ihe ha ga-eji mkpanaka emeputa ugbua. Zzzụ na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihe oriri bụ etu ndị na-anabata ozi si anabata kupọns na ihe ngosi. Ezutere m Adam Small, Onye-isi Nduzi nke Ederede site na arịrịọ, nke ụtụtụ a na Adam ghọrọ uri n'ụdị ihe na-atọ ụtọ nke na-agbadata pipeline.
Ederede site na arịrịọ nwere ụfọdụ ojiji dị mma nke ekwentị. Otu n'ime ha na-enye ndị ọrụ Marathon oge njedebe ha site na itinye ha ederede na nọmba ndebanye aha ha. Ọ dịghị mkpa ka ị chere ruo mgbe ị ga-ala n'ụlọ anya oge gị na PC!
Adam gara n'ihu ịkọwa SMS vs. MMS. Ebee SMS (Short Short Service) na-enye ohere ị ga-eziga mkpụrụ edemede 160 ederede na azụ, MMS (Multimedia Messaging Service) na-enye ohere ka eziga onyonyo, vidiyo na ụda.
Dika ndi na enye ekwenti na aga n’ihu ime ka netwk ha gbalite oso 3g, sụgharịrị = ọgbọ nke atọ) na ekwentị mkpanaaka na-aga n'ihu na-eme ka ihuenyo ha dị elu na mkpebi dị elu, nke a nwere ike mepee ahịa ahụ!
Kama izipu ozi ederede na inupu azu na nri ehihie, ikekwe ị nwere ike izipu obere vidiyo site na njikwa na ọrụ ma ọ bụ nnukwu vidiyo nke efere n'onwe ya! I nwekwara ike ịgafe ahaziri ahaziri tinye ihe kachasị ọhụrụ na teknụzụ barcode ka onye na-ere ahịa wee nwee ike ịfe onye na-agụ ya n'ihu ekwentị iji gbapụta dere.
Adam kesara ụfọdụ teknụzụ na-akpali akpali ọzọ na enweghị m ikike ịkekọrịta ebe a (mana), mana m na-atụ anya ịhụ na iji.
O Kwesịrị bebụ n'efu?
Ajụrụ m Adam ma ọ bụrụ na ọ chere na ịnye ọnụahịa ga-agbanwe maka izi ozi ebe a na United States (ederede mba ofesi na-abụkarị n'efu) ma kwuo na ọ nwere olile anya ọ bụghị. Otu ileba anya na spam na igbe gị na-akọwa ihe kpatara… ọ bụrụ na ide ozi ederede anaghị efu ego, ekwentị anyị ga-ejuputa ka anyị na-ekwu!
Tags: ahịa efuekwentị mkpanaakaSMSSMS ahịaederede ederede ahiatexting
Ọtụtụ n'ime ozi Blog m bụ Verbose
Mee 3, 2008 na 11: 58 PM
Ọ dị mma, ee, agbanyeghị na abụ m otu n'ime ndị agadi a dị oke egwu ma anaghị m eji ekwentị ma ọlị ederede - bara uru dị ka nkwanye ugwu nke na-achọghị ka onye nnata ahụ kwụsị ọrụ ma gee ntị, mgbe m matara na ha abụghị dị nso na ngwaọrụ email…
Mee 4, 2008 na 6: 55 AM
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị lekwasịrị anya na ọdịnaya ekwentị ma ọ bụ IM, ị ga-achọ nyocha gị iji gosipụta obere ojiji nke ozi ederede. ma ọnụọgụ ndị kachasị ọhụrụ na CTIA, otu nzukọ mba ụwa na-egosi ajọ mbunobi na-egosi na n'ime ndị nwe ekwentị ekwentị 262 nde US, gafere nde ederede nde 176. N'ime 400,000 otu nkeji na naanị US.
Izi ozi ederede na US na-eto eto na ọnụego nke 151% kwa afọ, na ndị 30 ruo 45 afọ na-eto eto na ọnụego nke 130%.
Naanị 3 nke ndị isi na-enye ndị ọrụ US ugbu a na-ekwe ka MMS buru ibu na ọtụtụ ndị isi egwuregwu na-elekwasị anya na mgbasawanye nke ahịa ahịa data ha n'ihi nsogbu ndị dị na ịnyefe MMS, nke na-erughị 30%.
Data abanyela na ọdịnaya mkpanaka bụ ọdịnihu maka ahịa mkpanaka, mana SMS maka nkwukọrịta dị ọcha na ọnụ ọgụgụ nke ngwa dị site na ederede na-eto.
Ugbu a ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50% nke ekwentị US nwere ikike data mana naanị ihe dịka 30% na-akwụ ụgwọ ndị ọzọ iji rụọ ọrụ atụmatụ ahụ.
Mee 4, 2008 na 3: 52 PM
Akwa stats, Rbowen! Daalụ nke ukwuu maka iwepụta oge iji kesaa stats ndị a. Anọ m na-agagharị na ụgbụ iji chọpụta ihe m nwere ike na isiokwu ahụ. Izi ozi n’ezie nwere uzu, mana ọ dị ka ọ nwere ụzọ ọ ga-esi nweta nnabata azụmaahịa bụ isi. Ikekwe afọ a bụ afọ!